သူမကို မချေမငံ ဆက်ဆံတယ်လို့ ပြောလာတဲ့ သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ ခင်ရတနာစိုး – Cele Posts
ပရိသတ်ကြီးရေ .. The Voice Myanmar ပြိုင်ပွဲဝင် ခင်ရတနာစိုး ကတော့ ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ အနုပညာအလုပ်တွေ လုပ်ဆောင် နေရသလို Live Sale တွေလည်း ရောင်းချနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။ လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ် တစ်ယောက်က အပြင်က ခင်ခင်နဲ့ Facebook ထဲက ခင်ခင်က မတူဘဲ Live Sale ရောက်းဖို့ဆက်သွယ်တာကို ဖုန်းထဲက နေ မချေမငံ နဲ့ပြန်ပြောတဲ့အပြင် သူမကို unfriend သွားတဲ့ အကြောင်း ကို မှတ်ချက်ရေးသားခဲ့ပါတယ် ။
အဲ့ဒီ Comment နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ခင်ခင်က အဲ့ဒီအချိန်တုန်းက မနီနဲ့ သီချင်းကိစ္စပြောနေတဲ့ အချိန်မို့ စကားပြောတာ ရပ်ပြီး ဖုန်းကိုင်ဖို့အဆင်မပြေလို့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြောပြီးချ လိုက်တာ ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ သူမသာမချေမငံပြောကြေးဆို ဒီအလုပ်တောင် လုပ်မနေဘူး လို့ ပြန်လည်ချေပပြောဆိုခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ် ။ ဒါ့အပြင်သူတစ်ပါးကိစ္စကို သေချာမသိဘဲ သူများစီးပွားရေးကို ဒုတ်နဲ့မထိုးဘဲ လူကြီးလူကောင်းဆန်ပါ လို့သတိပေး စကားလည်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ် ။
ခင်ရတနာစိုးရဲ့ ပရိသတ်တွေ ကတော့ အပင်မြင့်ရင်လေတိုက်ခံရတာ သဘာဝပဲမို့ ဝေဖန် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို စိတ်ထဲမထားဘဲ လုပ်စရာရှိ တာကိုသာ ဆက်လုပ်ဖို့ အတွက် အကြံဉာဏ်တွေပေး ထားကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ် ။ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်လာရင် ဝေဖန်မှုတွေနဲ့မကင်းတာမို့ ခင်ခင်တစ်ယောက် အားတင်းထားပါလို့ ပရိသတ်တွေက အားပေးစကားဆိုခဲ့ကြပါတယ် ။
သူမကို မခမြေငံ ဆကျဆံတယျလို့ ပွောလာတဲ့ သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ ခငျရတနာစိုး
ပရိသတျကွီးရေ .. The Voice Myanmar ပွိုငျပှဲဝငျ ခငျရတနာစိုး ကတော့ ပွိုငျပှဲပွီးတဲ့နောကျမှာ အနုပညာအလုပျတှေ လုပျဆောငျ နရေသလို Live Sale တှလေညျး ရောငျးခနြခေဲ့တာဖွဈပါတယျ ။ လတျတလောမှာတော့ ပရိသတျ တဈယောကျက အပွငျက ခငျခငျနဲ့ Facebook ထဲက ခငျခငျက မတူဘဲ Live Sale ရောကျးဖို့ဆကျသှယျတာကို ဖုနျးထဲက နေ မခမြေငံ နဲ့ပွနျပွောတဲ့အပွငျ သူမကို unfriend သှားတဲ့ အကွောငျး ကို မှတျခကျြရေးသားခဲ့ပါတယျ ။
အဲ့ဒီ Comment နဲ့ ပတျသကျပွီး ခငျခငျက အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးက မနီနဲ့ သီခငျြးကိစ်စပွောနတေဲ့ အခြိနျမို့ စကားပွောတာ ရပျပွီး ဖုနျးကိုငျဖို့အဆငျမပွလေို့ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ ပွောပွီးခြ လိုကျတာ ဖွဈကွောငျးနဲ့ သူမသာမခမြေငံပွောကွေးဆို ဒီအလုပျတောငျ လုပျမနဘေူး လို့ ပွနျလညျခပြေပွောဆိုခဲ့တာ တှရေ့ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျသူတဈပါးကိစ်စကို သခြောမသိဘဲ သူမြားစီးပှားရေးကို ဒုတျနဲ့မထိုးဘဲ လူကွီးလူကောငျးဆနျပါ လို့သတိပေး စကားလညျးဆိုခဲ့ပါသေးတယျ ။
ခငျရတနာစိုးရဲ့ ပရိသတျတှေ ကတော့ အပငျမွငျ့ရငျလတေိုကျခံရတာ သဘာဝပဲမို့ ဝဖေနျ တိုကျခိုကျမှုတှကေို စိတျထဲမထားဘဲ လုပျစရာရှိ တာကိုသာ ဆကျလုပျဖို့ အတှကျ အကွံဉာဏျတှပေေး ထားကွတာလညျးတှရေ့ပါတယျ ။ အနုပညာရှငျ တဈယောကျဖွဈလာရငျ ဝဖေနျမှုတှနေဲ့မကငျးတာမို့ ခငျခငျတဈယောကျ အားတငျးထားပါလို့ ပရိသတျတှကေ အားပေးစကားဆိုခဲ့ကွပါတယျ ။
ရည်းစား (၃) ယောက် တစ်ပြိုင်ထဲ ထားတဲ့ သူတစ်ယောက် အဖြစ် ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ မြင်တွေ့ရတော့မယ့် ရဲလေး